Farmaajo oo hor istaagi waayay Cabdi Xaashi | KEYDMEDIA ENGLISH
Farmaajo oo hor istaagi waayay Cabdi Xaashi
Sanadkii 2012-2016, wuxuu ahaa xubin Baarlamaan, iyo guddoomiyaha guddiga warfaafinta ee Golaha shacabka, halka uu 2016-2021 uu ahaa Xubin ka tirsan Aqalka Sare iyo Guddoomiyaha 1-aad ee Golha.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddoomiyihii Golaha Aqalka sare ee Baarlamaankii 10-aad ee JFS, Cabdi Xaashi Cabdullahi, ayaa markale loo doortay kursiga xildhibaannada gobollada waqooyi ee Somaliland ku matalaya Aqalka Sare ee Soomaaliya.
Cabdi Xaashi, ayaa qaab gacan taag ah ku guuleystay kadib markii uu tanaasulay musharixii la tartamayay ee Siciid Cumar Xuseen, 44 ergo ayaana u suura galisay iuu ka mid noqdo, Baarlamaanka 11-aad.
Cabdi Xaashi, wuxuu ku dhashay degaanka Baabiley ee dowlad degaanka Somaalida Itoobiya sanadkii 1946-dii, magaalada Harar, ayuu dugsiga sare uga baxay 1964-1968, Kuliyadda siyaasadd, Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed, ayuu sidoo kale ka baxay 1975-1977.
Kuliyadda Dhaqaalaha, Jaamacadda Umadda, iyo Machadkii Maamulka iyo Maareynta, ee SIDAM, ayuu sidoo kale, ka qalin daartay. Waxaa Sooyaalkiisa ku jirta inuu soo noqday Qasnajiga guud ee Wakaaladda ONAT, Xogheyaha xarumaha waxbasrashada UDHKS, Guddoomiyaha degmada Marka iyo Maareeyaha guud ee golaha murtida iyo madadaalada ama Theater-ka.
Sanatar Xaashi, wuxuu 1979-1990, xubin ka ahaa Golaha Shacabka , sidoo kale, 2004-2009: wuxuu ahaa Xubin Baanrlamaan, 2005-2007:, wuxu soo noqday Wasiirka Hidaha iyo Dhaqanka, halka uu Wasiirka Caafimaadka soo qabtay dhowr bilood intii u dhaxaysay 2008-2009.
Xaashi, waxaa lagu xasuustaa, dadaalkii uu u galay in aan sharciga laga beyrin isla-markaana lala xisaabtamo Xukuumadda iyo nidaamkii Farmaajo, oo jid qardo-seex ah dalka ku waday tan iyo billowgii 2017.
Doorashada lix ka mid ah kuraasta Aqalka sare xubnaha ku matalaya gobolada Waqooyi, (Soomaaliland) ayaa maanta lka socota hangarka Afisyooni ee magaalada Muqdisho.
Gobollada Waqooyi, oo Aqalka sare, ku leh 11 kursi, ayay Guddiga doorashadu soo hor mariyeen doorashada lix kursi, oo saddex ka mid ah si weyn loogu baratami doono.